Filtrer les éléments par date : mardi, 08 décembre 2020
mardi, 08 décembre 2020 22:24
Pilo kely : Ny fanananao moa raha atao lavanty dia faly ianao fa voavidinao indray
Natao debaka (antoka) angaha izy iny tamin'izany, ka rehefa natao lavanty, dia niazakazahana novidiana satria tsy foina, sa ve nisy naka izy iny, sa nisy nangalatra, dia jerem-potsiny ve izay naka na nangalatra, na nandroba fa dia faly fotsiny hoe niverina novidiana ilay raha.
Misaotra aloha na izany aza fa tafody an-tanindrazana izy iny, aza adino koa fa ny an'i Printsesy Soazara mba misy very koa, mila tadiavina ireo vakoka isam-paritra, ny lapa moa ao dia efa tontan'ny ela, mba mila kolize koa.
mardi, 08 décembre 2020 21:40
Oniversite Barikadimy : Niravona ny olana taorian’ny dinika an-databatra boribory
Mitohy ny fampianarana ary tazomina ireo saram-pisoratana anarana. Anisany nivoitra ireo nandritra ny dinika an-databatra boribory notanterahina androany tao amin’ny efitra fivorian’ny Filankevitry ny Faritra Atsinanana manoloana ny disadisa ao amin’ny campus Barikadimy, ka nikatsahana vahaolana hizoran’ny asa pedagôjika eo anivon’ny oniversiten’i Toamasina, ao anatin’ny fitoniana.
Nitarika ny fihaonana ny Governoran’ny Faritra Atsinanana, RAFIDISON Richard Théodore, ary niatrika izany ny avy amin’ny fitandroana ny filaminana nahitana ny Prefen’i Toamasina, ny mpitandro filaminana, ny filohan’ny oniversiten’i Toamasina sy ireo sojaben’ny teny aman-tsoratra sy ny DEGMIA, ny talen’ny kabinetran’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy mpanolontsaina teknika roa, ny Ben’ny tanànan’i Toamasina, solontena efatra avy avy amin’ireo mpianatra mitokona sy ireo mitaky ny hitohizan’ny fampianarana ary koa solontenan’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra sy ny vovonana miahy ny filaminana ao Barikadimy.
mardi, 08 décembre 2020 21:31
Fifidianana Loholona : Nanjakan’ny tsy fanarahan-dalàna ny fampielezan-kevitra
Hotanterahina afaka telo andro ny fifidianana Loholona eto Madagasikara handraisan’ireo mpifidy vaventy anjara. Hifarana ny 9 desambra misasak’alina ny fampielezan-kevitra.
Nisy androany ny tatitra mialoha izany latsabato izany nataon’ny KMF/CNOE, nanaovany fanamarihana maromaro ny zava-nitranga nandritra ny fampielezan-kevitra nanomboka ny 19 novambra 2020 lasa teo.
Teo amin’ny fitondram-panjakana dia tsy voahaja ny andininy faha 61 amin’ny lalàna fehizoro 2018-008 mifehy ny fifidianana amin’ny ankapobeany sy ny fitsapan-kevi-bahoaka izay mandrara ny fitokanan-javatra rehetra amin’ny fomba ofisialy, (And 61 and 1 amin’ny lalàna 2018-008 Voarara ny fitokanan-javatra rehetra amin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra).
Nahitana fitokanana zava-bita maromaro izay nataon’ny fitondram-panjakana nandritra iny fotoana fanaovana fampielezan-kevitra iny.
mardi, 08 décembre 2020 21:24
Jirama : Niainga androany teto Antananarivo ny « Caravanes de la lumière »
Niainga androany Talata 08 desambra 2020 tao amin'ny Jirama Ambohimanambola, Antananarivo ireo fiarabe hanao ny "Caravanes de la lumière" hitondra ireo hazavàna Led Cobras hapetaka manerana ireo renivohitry ny Distrika mbola tsy nisitraka izany.
"Hazavàna ho an'ny rehetra" no tanjona, ka hisitraka izany avokoa ireo renivohitry ny Distrika rehetra manerana ny Nosy hatramin'ny faran'ny taona 2020.
Renivohitry ny Distrika miisa 50 no hisitraka hazavàna an-dalam-be, izay fiaraha-miasan'ny Jirama sy ny Ministeran'ny Angovo ary ny Akoranafo, hanomezana endrika ny tanàna ary koa hanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana.
mardi, 08 décembre 2020 21:17
Fianarantsoa : Vavikely 3 taona niharan’ny fanolanana nitarika fahafatesana nataona zazalahy 11 sy 12 taona
Namoy ny ainy ny sabotsy 5 desambra 2020 ny zazavavy kely, 3 taona, niharan’ny fanolanana tambabe, nataona zazalahy roa 11 sy 12 taona.
Tao Tanambaro Zoara-Fianarantsoa no nitranga ity herisetra ara-nofo ity, ny 14 novambra 2020.
Voatery nampidirina hopitaly ilay zazavavy kely noho ny fahavoazan’ny taovam-pananahany, saingy tsy tana ny ainy.
Niakatra Fampanoavana ny 18 novambra 2020 ireo roalahy tompon’antoka tamin’ity fanolanana tambabe ity, ary tazomina am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjan’Ankazondrano Fianarantsoa ankehitriny.
mardi, 08 décembre 2020 20:23
Tahirim-bakoka : Hody aty Madagasikara sary sy soratanan’ny Mpanjakavavy Ranavalona III natao lavanty tany Londres
Hiverina eto an-tanindrazana tsy ho ela, ho tahirim-bakom-pirenena ireo vakoka mitahiry ny tantaran’i Madagasikara, izay natao lavanty tany Londres androany tolakandro.
mardi, 08 décembre 2020 20:07
Asa sosialy : Sakafo mafana sy ara-pahasalamana ho an’ireo zokiolona amin’ireo Boriboritany enina eto an-dRenivohitra
Nahazo sakafo mafana sy ara-pahasalamana avy amin’ny fiaraha-miasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny BNI Madagascar ny Zokiolona avy ao amin’ny FIZOMA, avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany ny Talata 8 Desambra 2020. Fiaraha-misakafo izay notanterahina tao amin’ny Tranom-pokonolona Analakely.
Nomena tombony manokana ireo zokiolona amin’izao ankatokin’ny fety izao.
Sehatra iray ahafahana mampiroborobo ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina ny hetsika toy izao hoy ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Mbola hitohy manerana ireo Boriboritany enina eto an-dRenivohitra ity hetsika fizarana sakafo ho an’ny Zokiolona ity.
mardi, 08 décembre 2020 19:57
« Digitalisation » : Nankatoavin’ny solombavambahoaka ny findramam-bola ho fanatanterahana azy
Nolanian’ny Solombavambahoaka teny Tsimbazaza androany Talata 08 desambra 2020 ny Volavolan-dalàna laharana faha 019/2020, findramam-bola mitentina 140 tapitrisa dolara entina manatanteraka ny « digitalisation » na ny fampidirana ny olom-pirenena tsirairay anaty « base de données » mikasika ny sata sivily voarakitry ny fandaharanasa PRODIGY (Projet du Gouvernement Digital et de Gestion de l’Identité Malagasy).
Izany dia ho ampiasaina amin’ny fikirakirana ny kopia, kara-panondro, fisotroan-dronono, fifidianana, sns.
mardi, 08 décembre 2020 19:53
Antananarivo Renivohitra – Mahajanga : Fitsidihana sy fifanakalozana traikefa
Noraisin’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Naina Andriantsitohaina sy ireo mpiara-miasa aminy tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely, androany Talata 8 Desambra 2020, ireo Delegasionina avy ao amin’ny Kaominina Ambonivohitr’i Mahajanga, izay notarihan’ny lefitra voalohan’ny Ben’ny Tanàna ao an-toerana.
Ny anton’izao fitsidihana izao dia ny mba hahafahan’ny Kaominina roa tonta mifanakalo traikefa mba ho fanatsaràna ny fomba fiasa ahafahany manatsara ny tanàna. Efatra andro no faharetan’izao fitsidihana izao, ary mizara efatra lehibe ny lohahevitra izay hodinihina sy hifanakalozana dia ny : fitantanam-bola, tsena, fitantanana mpiasa ary ny « Etat civil ».
Niroso tamin’ny fihaonana amin’ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny ireo delegasionina ireo taorian’izay, arahina atrikasa sy fitsidihana ireo toerana eto an-dRenivohitra toy ny tsena Anosibe, ny Akany Iarivo Mivoy, Vondrona Polisy Monisipaly sy Mpamonjy Voina.
mardi, 08 décembre 2020 19:52
Antenimieram-pirenena : Nahemotra ny fandinihana ny lalàna « Jao Jean »
Nahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fandinihana ny tolo-dalàna mahakasika ny fisotron-drononon’ireo Parlemantera izay natolotry ny Solombavambahoaka Rémi dit Jao Jean voafidy tao Antsohihy.